Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hong Kong Airlines dia mitana ny laharana vaovao amin'ny Class Business amin'ny Airbus A350
Hong Kong Airlines androany dia namoaka seza Business Class vao nohavaozina sy nohavaozina tamin'ny fiaramanidina Airbus A350 farany teo.
Seranam-piaramanidina Hong Kong nanambara ny fivoarana manaraka ny traikefany premium, miaraka amin'ny fisokafan'ny seza Business Class vao nohavaozina tamin'ny fiaramanidina Airbus A350 farany teo. Ankoatry ny fijery vaovao mamelombelona, ​​ny seza Business Class vaovao dia miaraka amin'ny iray amin'ireo rafitra IFE mandroso indrindra avy amin'ny Thales Group, manome fialam-boly lalina ho an'ny mpandeha mandritra ny diany.
Maoderina, kanto ary manokana no teny telo izay manondro tsara ny seza vaovao, izay natao tao an-trano tamin'ny fampiasana ny vokatra «Super Diamond» Rockwell Collins. Vidin'ny mpandeha ho iray amin'ireo seza Business Class ambony eto an-tany, mampanantena izy fa hanome fampiononana sy fiainana manokana tsy manam-paharoa na dia sidina lava indrindra aza. Izy io koa dia manatsara ny habaka ary manome ny fialam-boly rehetra, ny fisakafoanana ary ny fialan-tsasatra antenain'ny mpandeha amin'ny traikefa tsara momba ny Business Class.
Ho an'ireo mpandeha izay tia fialam-boly kely ao an-tsambo dia niara-niasa tamin'ny Thales Group ny Hong Kong Airlines hametraka rafitra IFE vaovao amin'ny fiaramanidina A350. Miaraka amin'ny monitor 17-inch widescreen ary koa handset tafiditra azo ampiasana, ny rafitra AVANT vaovao dia mampanantena ny mpandeha fa hisy traikefa fialam-boly mivoatra.
Ny CEO Qatar Airways dia niresaka tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fiaramanidina tany New Delhi, India